Articles tagged 'thokozano khupe'
Chamisa dumps MDC-T name 14 July 2018 MUTASA - MDC Alliance president Nelson Chamisa has now publicly disowned the MDC-T name saying his party would not be using the name ever again. Addressing thousands of party supporters at Mutasa DC yesterday, Chamisa warned his supporters not to be confused by the name and symbols on the ball...
Chamisa draws fire over Khupe 24 May 2018 HARARE - MDC Alliance presidential candidate and leader of the main faction of the MDC, Nelson Chamisa, has come under fire for not condemning the abuse of sacked former deputy leader, Thokozani Khupe, who was insulted by hordes of party supporters outside the Supreme Court on Tuesday. Khupe,...
Chamisa wants Khupe row resolved urgently 4 May 2018 HARARE - The Nelson Chamisa-led MDC camp has filed a Supreme Court application seeking to have its appeal contesting a High Court verdict which gave leeway to a rival camp led by Thokozani Khupe to use the party name and symbols to be heard on an urgent basis. In the application, MDC, which is...
Chamisa alleges foul play 26 April 2018 HARARE - Tuesday's shock ruling by the Bulawayo High Court left the MDC party crying foul as it played straight into Zanu PF's hands, which analysts said was the biggest beneficiary of the confusion in the MDC party. Respected University of Zimbabwe political science lecturer, Eldred Masunungu...
Chamisa justifies Khupe's sacking 25 March 2018 HARARE - MDC leader Nelson Chamisa yesterday drew large crowds at his rally in Murewa yesterday where he defended the decision to fire the party's former vice president Thokozani Khupe and two other senior officials. Murewa Centre was a sea of red as thousands of MDC supporters, majority who w...
MDC to seal Khupe's fate on Friday 20 March 2018 HARARE - MDC Alliance president Nelson Chamisa has said his patience is wearing thin with deputy president Thokozani Khupe who has spurned all overtures to reach out in a futile bid for political engagement. This comes as the main opposition party's highest decision-making body in between cong...